N'ozuzu ụlọ ịwụ: nwere bụ nchekwube
Na-eto ngwa ngwa nke China na aku na uba na mmụba nke ahịa ina, mba ọzọ ịdị ọcha ike ụdị na-banyere anụ ụlọ ahịa, na ha emewo ndị ha nlegharị anya na ụlọ elu-ọgwụgwụ ahịa. Na ihu nke mpụga mpi, China na ịdị ọcha ike ụlọ ọrụ ga-ahụ ụzọ ọzọ na-amalite na-eche echiche banyere otú ike a ụzọ.
Ịrị elu nke ndị mba ọzọ ịdị ọcha ike ụdị mwakpo mba ụdị
Kpa ye nsogbu ihe ndị mpi nke mba ọzọ ịdị ọcha ike ụdị, na mba ịdị ọcha ike ụdị na mbụ EBIONITISM obodo China wee malite inwe ndị coolness ma tụgharịa uche ha gaa na abụọ na nke atọ-EBIONITISM ahịa. Ọzọkwa, ha na ngwa ngwa malitere ichepụta kwekọrọ ekwekọ ahịa na ahịa azum hụ na mbụ akara ahịa efunahụghị, mgbe ịgbasa ahịa òkè nke abụọ na nke atọ-EBIONITISM ahịa.
Otú ọ dị, ụkpụrụ na-achịkwa atumatu nke China na ezigbo ala na ụlọ ahịa emewo ka na-aga n'ihu Mbelata elu-ọgwụgwụ ezigbo ala na ụlọ ndị dị otú ahụ dị ka ụlọ ndị ọgaranya, na enweghị ahịa nke elu-ọgwụgwụ azụmahịa ụlọ na first- na abụọ-EBIONITISM obodo, si otú na-adọkpụpụta ala elu-ọgwụgwụ ịdị ọcha ike ahịa na-eme ka ọ na ịda mbà. Ugbu a, anụ ụlọ maara nke ọma n'ụlọ mma ụdị nwere intercepted na elu-ọgwụgwụ ịdị ọcha ike ahịa, nke nwere oké mmetụta na mba ịdị ọcha ike ụdị.
N'otu oge ahụ, na ngwa mmepe nke China na ịdị ọcha ike ụlọ ọrụ, e nwere ma ama na ụlọ ụdị dị ka Wrigley na Jiu Mu. Ọtụtụ elu-ọgwụgwụ hotels na hotels amalitela otutu hydrangea ka ụlọ ụdị na elu àgwà na ala price. Ịrị elu nke mba ụdị ka apụnara pụta ụwa na ọnọdụ nke mba ịdị ọcha ike ụdị.